အဆင်မြင့် စမတ်ဖုန်းတွေ၊ ခေတ်စားလာတဲ့ စမတ်နာရီတွေနောက်မှာ AIoT Ecosystem ကပါ အရေးကြီးလာပြီလား? – MyTech Myanmar
အဆင်မြင့် စမတ်ဖုန်းတွေ၊ ခေတ်စားလာတဲ့ စမတ်နာရီတွေနောက်မှာ AIoT Ecosystem ကပါ အရေးကြီးလာပြီလား?
စမတ်ဖုန်းတွေဟာ အခုနှစ်ပိုင်းမှာ Feature အသစ်တွေ များစွာပါဝင်လာပြီး၊ Design ပိုင်း ပြောင်းလဲမှု အသစ်တွေကို ဆက်တိုက်ကြုံတွေ့နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်ဖို့ ယခင်တုန်းက စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း၊ Display နဲ့ Camera လိုမျိုး Hardware ပိုင်းကို အဓိကကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲလာပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အခုအချိန်မှာ စမတ်ဖုန်းတော်တော်များများဟာ အသုံးပြုသူတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိနေကြပြီဖြစ်သလို Camera ပိုင်းမှာလည်း နေ့ဘက်တင်မဟုတ်ဘဲ ညဘက်တွေမှာပါ ကောင်းကောင်းရိုက်ကူးနိုင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ OPPO Reno4 လိုမျိုး စမတ်ဖုန်းတွေဆိုရင် ညဘက်မှာပါ လှပတဲ့ Portrait ပုံတွေရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ Night Flare Portrait လိုမျိုး Feature တွေ၊ AI Color Portrait လိုမျိူး Feature တွေကိုပါ ထည့်သွင်းနိုင်နေပါပြီ။
ဒါတင်မဟုတ်သေးဘဲ အခုနောက်ပိုင်းမှာ စမတ်ဖုန်းတွေဟာ Display Size ကို အလေးပေးလာပြီး ပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ Display တွေကို အသုံးပြုလာကြတာနဲ့အတူ ဖုန်းကို အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာ အချက်တစ်ချက်ကလည်း အရေးကြီးလာပြန်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဖုန်းရဲ့ အလေးချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ အလေးချိန်ဟာ 200g အထက်ကိုရှိလာကြပြီဖြစ်ပြီး ဖုန်းကို တနေကုန်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လက်မှာသိသိသာသာကို လေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Screen Size အရလည်း ပုံမှန်အရွယ်အစားရှိပြီး လက်ထဲမှာကိုင်ရပေါ့ပါးနေဖို့ကလည်း ထည့်သွင်းစဥ်းစားလာတဲ့အချက်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီနေရာမှာလည်း OPPO Reno4 စမတ်ဖုန်းဟာ 6.4” FullHD+ AMOLED Display ကို ထည့်သွင်းပေးထားပေမယ့် အလေးချိန်ကို သိသိသာသာပေါ့ပါးနေစေမယ့် 165g ပဲ ရရှိအောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အလေးချိန်တင်ပေါ့ပါးနေတာမဟုတ်ဘဲ အထူကလည်း 7.7mm ပဲရှိနေတဲ့အတွက် ယခုနှစ်ဖုန်းတွေထဲမှာ အပေါ့ပါးဆုံးဖုန်းတွေထဲက တစ်လုံးအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။ အခုလိုမျိုး ပြုလုပ်ထားပေမယ့်လည်း နောက်ကျောဘက် Design ကလည်း လှပတဲ့ Color Gradient တွေကို အသုံးပြုပေးထားတာက သဘောကျဖို့ကောင်းနေပြန်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးစမတ်ဖုန်းတွေဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် ထည့်သွင်းစဥ်းစားရတော့မယ့်အချက်တစ်ခုက ဖုန်းနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရမယ့် AIoT Ecosystem တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြောစရာမလိုလောက်အောင်ကို စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေက အာရုံစိုက်လာတဲ့အချက်တစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေဟာ စမတ်ဖုန်းအပြင် TWS Earbuds တွေ၊ Smartwatch တွေကိုပါ ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာကြပါတယ်။
Smartwatch တွေကလည်း အခုခေတ်မှာ ရေပန်းစားလာပြီးတော့ Notification ၊ Fitness နဲ့တခြားသော Feature တွေကိုပါ ဖုန်းကိုထုတ်ပြီး အသုံးပြုစရာမလိုအပ်ဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင်တာက အားသာချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လက်မှာအမြဲတမ်းထုတ်ပတ်ထားရတဲ့ Gadget တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက် လှပဖို့အပြင် Battery Life ၊ Feature ပိုင်းကလည်း ထည့်သွင်းစဥ်းစားသင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
OPPO ကနေပဲ မကြာသေးခင်တုန်းကမှ စျေးကွက်ထဲမှာရောင်းချနေတဲ့ OPPO Watch ဟာဆိုရင် 41mm နဲ့ 46mm ဆိုတဲ့ ဗားရှင်း ၂မျိူးရှိပြီး 46mm ဗားရှင်းမှာဆိုရင် Flexible Dual-Curved AMOLED Display ပါဝင်တဲ့အတွက် ကြည့်ရတာရော၊ အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာပါ ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ထွက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ ဒါတင်မဟုတ်သေးဘဲ အဓိကအားသာချက်တစ်ခုကတော့ Google WearOS ကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီး ဒီလိုမျိုး WearOS ကြောင့် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Application တွေ၊ Feature တွေနဲ့ တခြားသော App တွေကလည်း အများအပြားရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Smartwatch တစ်လုံးမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Battery Life အနေနဲ့လည်း OPPO Watch ဟာ အများဆုံး Power Saver Mode မှာ ၂၁ ရက်အထိ အသုံးပြုနိုင်သလို Smart Mode မှာလည်း ၃၆ နာရီအထိ သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားပြန်သွင်းတဲ့အချိန်မှာလည်း ၁၅ မိနစ်အားသွင်းရုံနဲ့ 46% အထိ အားပြန်ပြည့်တာက OPPO စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေအတွက် ဖုန်းလိုမျိုးပဲ တူညီတဲ့ Fast Charging စနစ်ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် အခုအချိန်မှာ စမတ်ဖုန်းအသစ်ကို ရေရှည်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် အခုပြောသွားသလိုမျိုးပဲ စမတ်ဖုန်းရဲ့ ပုံမှန်ကြည့်နေကျဖြစ်တဲ့ Display ၊ Performance နဲ့ Camera ပိုင်းတွေတင်မဟုတ်ဘဲ လက်ထဲမှာကိုင်ရပေါ့ပါးဖို့၊ Design လှပပြီး AIoT Ecosystem ကောင်းကောင်းရှိနေဖို့ကလည်း အရေးကြီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ OPPO ရဲ့ Reno4 စမတ်ဖုန်းနဲ့ OPPO Watch လိုမျိုး လိုက်ဖက်တဲ့ Ecosystem တစ်ခုကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Reno4 ကို ၄၉၉,၉၀၀ ကျပ်၊ OPPO Watch (46mm) ကို ၃၁၉,၉၀၀ ကျပ် ဒါမှမဟုတ် OPPO Watch (41mm) ကို ၂၂၉,၉၀၀ ကျပ်နဲ့ နီးစပ်ရာဖုန်းအရောင်းဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
MyTech Myanmar2020-09-07T15:37:15+06:30September 7th, 2020|Mobile Phones, News, Oppo|